Wararkii ugu Dambeeyay Dagaal Culus oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho | Allbanaadir
Wararkii ugu Dambeeyay Dagaal Culus oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Degmada Kaaraan waxaa maalmahan caadi ka noqday Dagaal goos goos ah, oo Saddex maalmood oo xiriir ah waqtiyo kala duwan dhacayay, kaasi bulshada degaanka uu ku noqday mid ku abuuray cabsi, walbahaar iyo walwal.
Dagaalka waa uu dhici karaa goor walba iyo goor kasta, ujeedo iyo ujeedo la’aan, sabab iyo sabab la’aan.
Dagaalkan ku soo laab laabtay degmada Kaaraan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa Millitariga oo u abaabulan hab beeleed ay isku qabsadeen dhul, kaasi oo ilaa hadda aanan laga gaarin natiijo sax ah.
Xalay oo ugu dambeysay degmada Kaaraan fiidkii ilaa 09:00 waxaa ka dhacay Dagaal u dhaxeeyay Ciidamadii maalmahanba isku hayay halkaasi, Dagaalka xalay dhacay wuxuu geystay khasaare kala duwan, balse ilaa hada lama oga khasaaraha rasmiga ah, maadaama xilli habeen ah ay aheyd.
Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa xasilinta oo dhexdhexaadin u tagay halkaasi ayaa laftirkooda la kulmay iska caabin kaga timid garab ka mid ah dhinacyada isku haya degmadaasi.
Dadka degan degmada Kaaraan gaar ahaan aagga Dagaalka uu ku soo noq noqday ee loo yaqaano Buula-maaxaay ayaa Maamulka degmada, kan Gobolka ugu baaqay in arrintan faraha ka baxday wax laga qabto, si badqab ay u helaan rayidka degan degmada.
Saraakiil sar sare oo ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka iyo Odayaal kala matalaya labada dhinac ee is haya ayaa wada dadaalo lagu dhameynayo colaada soo laab laabatay, maadaama dagaal uusan ku dhalan wiil balse uu ku dhinto.
Shacabka degmada Kaaraan gaar ahaan dadka degan qeybta iska hor imaadka aan waqtiga xadidan laheyn ayaa sheegay mar walba in ay filan karaan xabad, maadaama dhinacyuada is haya ay yihiin Ciidan, ilaa heshiis sax ah laga gaaro.